Azụmaahịa nke Netwọk mmekọrịta | Martech Zone
David Silver, bụ onye ji aka ike achụ ego na ọkachamara na netwọkụ mmekọrịta, dere The Social Network Atụmatụ Atụmatụ: Atụmatụ iri atọ ga -emepụta nnukwu akụ na ụba. M na a na-agụ site na akwụkwọ mmasị - ebe m bụ a ngalaba-nchoputa nke Obere Indiana na onye nwe a netwọk mmekọrịta maka ndị agha Veterans.
Netwọk abụọ ahụ nwere ụdị azụmahịa na ebumnuche dị iche iche. Pat Coyle nwere ma na-arụ ọrụ Obere Indiana ma na-achọ ịkwalite ikike dị n'ime ya iji wuo kacha network - eweta ọnụ talent, curbing na ụbụrụ mmiri, na-akwado nkà na ntụrụndụ mpaghara, na inye etiti maka okike na echiche. Enwere ikike na ohere iji nọgide na-ewu obere Indiana - yabụ ahụghị m atụmatụ azụmaahịa ebe (n'agbanyeghị na m ga-eso Pat kerịta akwụkwọ ahụ).
Ndị Agha Mmiri Vets na-aga ịghọ ụlọ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ na-enweghị uru. Ihe mgbaru ọsọ nke Navy Vets bụ ka ọ bụrụ nnukwu mmekọrịta na mmekọrịta kacha mma maka Ndị agha Navy nke United States. A ga-enye onyinye ego ọ bụla nke netwọkụ na ndị ọrụ ebere nke ndị agha ochie dịka ndị otu ya mere ntuli aka. Anam atu anya ide ihe nlele nke mbu! Obi abụọ adịghị ya na netwọk ahụ ga-agbanwe ndụ separate ma kewapụ onwe ya na netwọkụ ndị agha ndị ọzọ na-achọ ime ka ego dị n'azụ ndị agha ahụ ochie nyerela nke ukwuu.
Atụmatụ Ntanetị Social Network na-eme ka echiche dị iche na otu netwọkụ mmekọrịta kwesịrị isi nweta ego. Na nkenke, ekwesịrị itinye ike nke ọnụọgụ n'ime netwọkụ dị ka Ntuziaka netwọọdụ iji kwalite azụmahịa na ụlọ ọrụ. Cheedị banyere ụlọ akụ, ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ ọka iwu, wdg. Ịzụrụ ihe onye isi [tinye ụlọ ọrụ ebe a] nke Nta Indiana. Nke ahụ bụ ebe David Silver na-ahụ ikike.
Apụghị m n'ezie itinye 18 azum ọnụ depụta ebe a… Echere m na e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ezie. David gụnyere akwụkwọ zuru oke na ịchọta na ịzụrụ, na-eto eto, na-akpata ego na ọbụna ire netwọkụ mmekọrịta gị. Ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na ndị na-ekwuchitere okwu ga-aba uru na $ 600 na $ 1,000 kwa otu onye David na-akwado… site na karịa nde Ning netwọk na ọtụtụ narị nde ndị ọrụ… nke ahụ bụ ọtụtụ ego nọ ọdụ n'ebe ahụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọchụnta ego na-arụsi ọrụ ike nwere ike ịrara onwe gị nye na-arụ ọrụ ehihie na abalị iji bulie netwọkụ mmekọrịta gị - karịa nke a nwere ike ịbụ naanị akwụkwọ ị na-achọ! Ọ ga-amasị m ịhụ ihe atụ dị adị nke ụwa iji soro usoro ọ bụla dị na akwụkwọ a. Maka ọtụtụ akụkụ, ọ na-egosi na akwụkwọ ahụ bụ ntakịrị amụma karịa atụmatụ azụmahịa.
Ma banyere amụma David, ọ bụ ezie… ekwenyere m! Ike nke netwọkụ mmekọrịta esoghị na njirimara, ikpo okwu, ọnụọgụ… ọ bụ maka mkpa netwọkụ iji zoo ahịa na okwu ọnụ ahịa ahịa na ụdị nke oge a.
Tags: david ọlaọchausoro mgbasa ozi mmekọrịtaatụmatụ azụmaahịa na-elekọta mmadụatụmatụ azụmaahịa netwọkụ mmekọrịta